Ntuli - libya-canada.org
Anyị Pigskin Prognosticating Puggle Hammers Nhọrọ Ziri Ezi na Nnukwu Ntuli Aka Anyị (Anyị bụ 22-na-1!)
Ndị ọrụ nọ ebe a t Aces Casino Entertainment (AKA ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa kacha elu d e SoCal) nwere obi ụtọ na-akparịta ụka banyere akụkọ ihe only eme nke ụlọ ọrụ a gara, na-alaghachi na 1994, mgbe Experts Casino mụrụ. Onyenwe anyị maara na anyị dị ka ndị nwere isi ọma na mpaghara a – Website d e mmekọrịta anyị na Bruce Willis, Ezigbo Ezinaụlọ nke Orange County na ndị Kardashians, ruo”bọọlụ nke ejima arụmụka” aha ọjọọ anyị. (Ed. Mara: Anyị ga-eleta isiokwu a’bọọlụ ejima’ ebe a t Aces Casino Blog ma emechaa ọnwa a.)
Mana ndị enyi, ka m gwa gị, Ọ dịghị ihe mere isi okwu maka ụlọ ọrụ a ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya, na-atọ ọchị ma na-agbagwoju anya mgbe ahụ Experts Casino Blog na-agba ọsọ afọ 25 na mbipụta amụma Super Bowl kwa afọ.
Ya only, ka anyị na-etinye afọ ọzọ nke NFL soccern’ime akwụkwọ akụkọ ihe only eme, anyị ga-emetụ aka na ngwa ngwa na nsonaazụ nke amụma 2019 Super Bowl.
Ọ bụ mmeri ọzọ!
Nke ahụ ziri ezi, ndị enyi m …. Honey, prognosticating puggle, gbatịkwuru akụkọ anyị na-eburu ndị mmeri Super Bowl gaa d e ndekọ 22-na-1 dị elu, yana nhọpụta un nke New England Patriotsn’ehihie Wednesde gara aga.
22-na-1. (Ed. Rịba ama: Ihe ndekọ anyị gaara abụ nke zuru oke, ma ọ bụrụ d e ọ bụghị maka nke ahụ, Onyx, na-enye anyị nri ahụ megide ndị Broncos.) Ee, ọ tụrụ anyị n’anya dịka gị. Anyị na-abanye kwa izu na mpaghara nke nsogbu na ihe gbasara nke puru omume, ma anyị enweghị ike ikwere usoro a dị egwu maka oge. Mana, ee, mascot ụlọ ọrụ anyị emeela ya ọzọ. (Lee njikọ a.)
Amaara m ndị Patriots agaghị”nkịta” ya.
Blog t oge 2018 NFL dị ugbu a t enyo anya anyị, anyị nwere ike ịlaghachi azụ d e azụmaahịa ụlọ ọrụ oroma nke ụlọ ịgba chaa chaa nke ihe ebe a t Aces Casino Entertainment. Anyị ga-alaghachi na Tọzdee website t akwụkwọ ozi ọzọ na-atọ ọchị banyere ụfọdụ ihe ọma anyị hụrụ na ịntanetị, anyị nwere olile anya. Nke ahụ niile bụ maka ugbu a – Anyị ga-ahụ gị mgbe ahụ!